सूचना, शिक्षा र सञ्चारका लागि भलाकुसारी | Bhalakushari
त्यो स्थलमा भिड किन लागेको हँ ? एक जना व्यक्ति हस्याङ फस्याङ गर्दै भिडलाई चिर्दै प्रदर्शनी स्थलमा टाउको एउटा छिराउँदै पुगे र मेरो नजर उक्त व्यक्ति माथि पुग्यो उनको नजर हाम्रो टेबुलमा रहेको निःशुल्क वितरणमा परे ।
उनले सोधे “के हो यो भलाकुसारी भन्ने मैले हाम्रो गाउँमा पनि देखें देखें जस्तो लाग्यो” मैले भनें,‘ यो स्वास्थ्यसम्बन्धि रेस्फेकले निकाल्ने पत्रिका हो भाइ ।’
उनले भने,‘ यो पढ्न कति पर्छ ? यो त मैले घरमा बुढीलाई पनि लगि दिनु पर्‍यो । ’
मैले तुरुन्त जवाफ दिएँ । ‘हेलो तपाईं एकछिन साइडमा बस्नुस त । म यी सबै व्यक्तिहरूलाई हाम्रो प्रकाशनहरू दिएर पठाउँछु ।’ भलाकुसारीका र महिला स्वास्थ्यका केही अंकहरू र अन्य सामाग्रीहरू हातमा थम्याइ एक हुललाई पन्छाएँ र ती व्यक्तिसँग कुरा गर्न थालें । उसलाई अस्पताल बच्चाहरूलाई लिएर जाँदा दिनभरी जस्तो लाग्ने र त्यो दिन कमाएर विहान/बेलुका छाक टार्नु पर्ने आफुहरूलाई स्वास्थ्य शिक्षाको केहि ज्ञान नभएकोे रहेछ । त्यसकारणले उनी स्टलमा स्वास्थ्यसम्वन्धि जानकारी लिन त्यस्तो उत्साही भएको रहेछ ।
मैले उक्त व्यतिmलाई भने “भाइ सबै नै रोगको उपचार यो पत्रिका पढेर मात्र निको हुँदैन तर सर्वप्रथम दिसा पखाला लाग्दा के गर्ने, आगोले पोल्यो भने के गर्ने, बच्चाहरूलाई पोषण युक्त के खान दिने, नसर्ने रोग भनेको के हो र कसरी स्वस्थ हुने आदि बारे थाहा पाउँन सकिन्छ । ठूलो रोग निको पार्न चाहिं डाक्टर वा चिकित्सक कहाँ जानु पर्छ । त्यसो भने पछि ती व्यक्तिले टाउको हल्लाएर स्वीकृति जनाए । म पनि सन्तोषको लामो सुस्केरा तानेर अर्को दर्शकतिर लागें ।
के हो भलाकुसारी
भलाकुसारीको अर्थ नै बोल्ने, दुःख सुखको कुरा साट्ने हो । त्यसकारणले समुदायमा यसले संचारको काम गरिरहेको छ । भलाकुसारी यसरी निरन्तर प्रकाशन गरिरहनु नै यो गौरवमय कुरा हो । भलाकुसारीमा प्रकाशन भएका लेखहरूलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि सूचना र शिक्षाको रुपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले मार्ग दर्शनको प्रयोग गरेको पाइन्छ । ती सामग्रीहरूले उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा गाँठा फुकाउन गरेको पाइन्छ भन्ने भलाकुसारीको पाठक प्रतिक्रिया अनुसन्धान २०७३ मा उल्लेख छ । भलाकुसारी स्वास्थ्य सम्बन्धि सूचना दिने मात्र नभइ यसमा प्रकाशन भएका लेखहरूले जनमानस विशेषतः ग्रामिण भेगका पिछडिएका पाठकहरूलाई यसले स्वास्थ्य अधिकार र संविधानले दिएका कुराहरूबारे सचेतना दिने कार्य गर्दै आएको छ ।
रेस्फेकको सूचना तथा अभिलेख
(क्ष्ऋत्) सूचना संचार प्रविधीलाई अंगाल्दै दिगोपनको लागि र पाठकहरूलाई ध्यानमा राखेर अहिलेसम्म प्रकाशन भएका सबै अंकहरू डिजिटल गरेर ईलाइव्रेरीमा राखेको छ । यसका लागि रेस्फेकको इलाइब्रेरीमा गइ भलाकुसारी कोष्ठमा जानुपर्ने हुन्छ ।
भलाकुसारीमा प्रकाशन भएका लेखहरूलाई एउटा शसक्त सूचनाका रुपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । उदाहरणको लागि तल्लो वर्गका स्वास्थ्य कर्मीहरूले मार्ग दर्शनको प्रयोग गरेको पाइन्छ । ती सामाग्रीहरूले उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा गाँठा फुकाउन गरेको पाइन्छ भन्ने भलाकुसारीको पाठक प्रतिक्रिया अनुसन्धान २०७३ मा उल्लेख छ ।
भलाकुसारी स्वास्थ्य सम्बन्धि सूचना दिने मात्र नभई यसमा प्रकाशन भएका लेखहरूले जनमानस विशेषत ग्रामिण भेगका पिछडिएका पाठकहरूलाई यसले स्वास्थ्य अधिकार र संविधानले दिएका कुराहरूलाई एउटा झकझकाउने सन्देश पनि दिएको पाइन्छ ।
२९ वर्ष अगाडि यो पत्रिकाको पहिलो अंक छापिने बेलामा र त्यसको दुइदशकसम्म पनि अहिलेको जस्तो हात हातमा मोवाइल र इन्टरनेट थिएन । जसले गर्दा स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना र शिक्षा पाउन धेरै मुश्किल थियो । पाइहाले पनि भेटि हाले पनि अंग्रेजीमा मात्र पाउन सकिन्थ्यो । ग्रामीण भेगमा काम गर्ने विशेषत ग्रामिण स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरु अंग्रेजीमा कमै ज्ञान राख्थे । यसैं कारणले उनीहरुलाई लक्षित गरेर हाते स्वास्थ्य पुस्तिका प्रकाशन गर्ने जमर्को गरियो ।
भलाकुसारीको अर्थ नै बोल्ने, दुःख सुखको कुरा साट्ने र आफ्ना मनका कुरा भन्ने हो । नेपाली समाजमा चौतारीको रूख मुनि बसेर दुःख सुखका कुराकानी साटासाट गर्ने तथा कुनै विषयमा छलफल गर्ने चौतारी हो । त्यसकारण भलाकुसारीको अगाडिको पाना ९अयखभच उबनभ० मा क्थmदयष्अि को रूपमा रूख मुनि चौतारीमा बसि छलफल गरिरहेको पाइन्छ । यी कुराहरू व्यक्ति तथा पाठक वर्गलाई कमै ज्ञान हुन्छ । यस पत्रिकालाई एउटा चित्रबाट पनि समुदायमा सञ्चारको काम गरिराखेको पाइन्छ ।
नेपालमा सरकार तथा अन्य सरोकारहरुले गर्दा शिक्षामा एक फड्को मार्न सकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । हाम्रो देशका गाउँ शहरका महिला समुहहरुमा आयआर्जन तथा साक्षरता कार्यक्रम संचालन भइरहेको छ ।
भलाकुसारी पाठक सर्वेक्षणमा ती कक्षाहरुमा भलाकुसारी र रेस्फेकको महिला स्वास्थ्यलाई लक्षित स्वास्थ्य पत्रिका “महिला स्वास्थ्य” प्रयोग गरेको पाइन्छ ।
भलाकुसारी प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा बाहेक विद्यालयहरूमा, महिला समूह, प्रौढ कक्षाहरुमा सार्वजनिक तथा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र पुस्तकालयहरुमा, समूहहरुमा, ग्रामीण युवा क्लवहरुमा वितरण हुँदै आएको छ । महिला तथा प्रौढ कक्षाहरुमा एक तहको अध्ययन पूर्ण भएपछि यस पत्रिकालाई छलफलको लागी प्रयोग गरेको पाइन्छ । त्यसैंगरी स्कुलका शिक्षकहरुले विद्यार्थीहरुलाई स्वास्थ्य शिक्षा दिन यो पत्रिकाको आधारमा नै दिएको अनुसन्धानले देखाएको छ । यो बाहेक समुदायमा कुनै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी छलफल गराउन प्रयोग गरेको पाइन्छ ।
स्कुलमा शिक्षकबाट विद्यार्थी र विद्यार्थीहरूबाट अभिभावकहरूलाई सूचना दिने मात्र नभई यसले ग्रामिण नेतृत्व तह, महिलाहरू, पत्रकारहरू तथा सवै वर्गहरूलाई एउटा सचेतना दिने, शसक्तिकरण गर्ने एवं संगठन गर्न पनि यसले भूमिका खेलेको पाइएको छ ।
रेस्फेकले केहि महिना अगाडि ज्च्त्ऋ संजाल जिल्लाहरूमा गरेको स्वास्थ्य अधिकारको अभिमुखिकरण तालिममा भलाकुसारीबाट विभिन्न स्वास्थ्यसम्वन्धि ज्ञान र शिक्षा प्राप्त गरिरहेको अनुभव सुनाएका थिए । उनीहरुका अनुसारले उपलव्ध गराउने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, महिलाहरुको प्रजनन अधिकार, सुत्केरी स्याहार , नसर्ने रोग, सरुवा रोगबारे ज्ञान र शिक्षा प्राप्त भइरहेको छ ।
भलाकुसारीले स्वास्थ्य सामाजिक मुद्दाहरुलाई पनि समेटेको पाइन्छ । जस्तै : दाइजो, वोक्सी, लैङ्गिक समानता । यसले स्वास्थ्य स्थिति मात्र नभई सामाजिक सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन मद्दत पुर्‍याएको छ ।
यस पत्रिकामा लेखिएको लेखहरुले Behavior change communication भूमिका खेल्न मद्दत पुर्‍याएको छ । धुम्रपान र मद्यपान गर्ने व्यक्तिहरुलाई सजग बनाएको र व्यवहार परिवर्तन भएको अनुभव स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण जिल्ला सञ्जालका साथीहरुले गरेका छन् । केटाकेटीहरुलाई खाना खानु अगाडि हात धुनुपर्छ भन्ने ज्ञान यो पत्रिकामार्फत पनि जागृत भएको छ । यसबाहेक नसर्ने रोगको रोकथाममा यसले विशेष भूमिका निभाउँदै आएको छ ।
यो बाहेक समुदायमा कुनै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी छलफल गराउन प्रयोग गरेको पाइन्छ ।
भलाकुसारीको समयसमयमा गरेको पाठक सर्वेक्षणमा यो पत्रिका निकै लाभदायक भएको हुनाले आफुले पढी सकेपछि आफन्तलाई पढ्न दिने महत्वपूर्ण कुरा जानकारी प्राप्त भएको छ । कतिपय उपभोक्ताले आफ्नो कुनै समस्या हुदाँ यस पत्रिकामा दिएको जानकारी अनुसार साधारण उपचार एवम् हेर विचार गरेको पाइएको छ । जस्तै : रुघाखोकीबाट बच्ने, बच्चाहरूलाई खोप लगाउने एवम् पौष्टिक आहार सम्बन्धी, नसर्ने रोगको उपायहरू दाँतको हेरविचार आदि ।
यो ग्रामिण भेगलाई मात्र वितरण नगरेर शहरहरूको संगठन, महिला समूह, क्लवहरूमा पुग्ने व्यवस्था गरेको खण्डमा देशभर स्वास्थ्यस्तर उठाउन मद्दत पुग्ने छ ।
यो भलाकुसारी पत्रिका हातमा नपरेकाहरुका लागि रेस्फेकले विद्युतिय पुस्तकालयमार्फत संसारभर पुर्‍याइरहेको छ ।
भलाकुसारीले स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा संचार सम्प्रेषण गर्ने एउटा ससक्त संवाहकको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउन साथै सूचनाको तृष्णा लागेकोलाई प्यास मेटाउन सफल भएको छ । यसले स्वास्थ्यकर्मी महिला, किशोर, किशोरी तथा समुदायको अग्रजहरुलाई समेत माला उन्ने काम गरेको छ । भलाकुसारी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उकास्न २८ वर्ष निरन्तर प्रकाशन गर्दै आएको यो एउटा रेस्फेकको गौरवमय इतिहास र दस्तावेज हो ।